Archives yeAugust 2021
Midziyo isingatsigirwe inomhanya Windows 11 inogona kusatambira zvigadziriso
August 31, 2021 by billy16
kuva Windows 11 pamichina isina kutsigirwa inogona kuve ine njodzi bhizinesi. Zvaunoda kuziva Microsoft nguva pfupi yadarika yakasimbisa nzira yekuwana Windows 11 pamidziyo isina kutsigirwa. Tichifunga kusatsigirwa kweiyo nzira, kune njodzi. Imwe njodzi yakadaro ndeyekuti zvigadziriso zvinogona kunge zvisina kuvimbiswa. Microsoft ichangobva kuburitsa yakagadziridzwa PC Health Check app kubatsira… [Verenga zvakawanda ...] nezve zvishandiso zvisina kutsigirwa zvinomhanya Windows 11 inogona kusatambira zvigadziriso
Blast kubva zvakapfuura seNokia's 2014 Moonraker smartwatch zvirongwa zvekushambadzira zvakaburitswa
August 31, 2021 by Justin26
Nokia yakadzimwa 2014 smartwatch, iyo Moonraker, yakaburitswa kakawanda, asi pachine dzimwe nyaya dzekutaura nezve kudzima kwe smartwatch. Evan Blass akaisa mamwe mapikicha airatidza hurongwa hweNokia hwekutengesa smartwatch yekutanga. Gallery Thomas Messett, aishandira Nokia mukushambadzira kwedhijitari, akaburitsa zvimwe zvisati zvambozivikanwa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Blast kubva kare sezvo Nokia's 2014 Moonraker smartwatch zvirongwa zvekushambadzira zvakaburitswa
Aya ndiwo akanakisa eGirazi S21 Ultra vharidzi ekuchengetedza aunogona kutenga izvozvi
August 31, 2021 by bartez64
Kana zvasvika kune makuru masikirini, iwe uchazoda kuvachengeta vasina kukwenya, ndosaka iwe uchizoda kushandisa akanakisa Galaxy S21 Ultra screen vadziviriri. Foni inoyera mukati inokwenenzvera 6.8 inches, zvinoreva kuti kune yakawanda yezvivakwa iyo inogona kukwenywa. Neraki, patova nesarudzo dzakati wandei kana iwe uchitsvaga yakanakisa Galaxy S21 Ultra skrini inodzivirira… [Verenga zvakawanda ...] nezve Aya ndiwo akanakisa eGirazi S21 Ultra vharidzi ekuchengetedza aunogona kutenga izvozvi
Rongedza Discord rakanamatira yakazara-skrini mode
Discord ndeimwe yeanonyanya kufarirwa maapplication mudunhu remitambo. Iyo yakanaka nzira iyo iri asi haina kukanganisa-isina. Vashandisi vayo vari kunyunyuta nezve imwe yenyaya. Ivo vari kuzivisa kuti Discord yakanamatira mune yakazara skrini screen uye ivo vanoda kuziva nzira yekugadzirisa iyi nyaya. Munyaya ino, tiri kuzokurukura zvaunogona kuita kana iwe ukaona kuti Discord yakanamirwa pazere izere… [Verenga zvakawanda ...] nezve Fix Discord yakanamatira mune yakazara skrini screen
Xiaomi 12 inogona kunge iine yakadzika resolution kamera ichienzaniswa neyakatangira
Xiaomi inonzi iri kukanda iyo 108MP sensor pane yayo mureza mafoni. Chii chaunoda kuziva Rutsva rutsva runoratidza kuti Xiaomi 12 iri kuuya ichazunungusa katatu kamera setup kumusana, nelenzi imwe neimwe ichizunza 50MP sensor. Izvi zvinoreva kuti kambani inogona kudonhedza iyo 108MP sensor pane iyo Mi 11 yakatevedzana. Iyo inouya Xiaomi mureza yaimbove nerunyerekupe kuratidza Samsung's… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi 12 inogona kunge iine yakadzika resolution kamera ichienzaniswa neyakatangira
Maitiro Ekuvharira Mumwe Munhu muGoogle Drive paPC, Android uye iOS
August 31, 2021 by Martin6
Pakutanga mwedzi uno, Google yakawedzera kugona kuvhara vanhu muGoogle Drive. Iyi ficha nyowani inomisa vamwe vashandisi kubva mukuwana kwete chete iyo data yakagovaniswa newe asi zvakare inobvisa yavo yapfuura mafaera akachengetwa mudhiraivho yako kuti iwe ugone kuchengetedza imwe nzvimbo yekuchengetera. Heano maitiro aunogona kuvharira mumwe munhu muGoogle Drive pamwe nekuvasunungura gare gare. Bvisa / Vhura Vashandisi muGoogle… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekuvharira Mumwe munhu muGoogle Drive paPC, Android uye iOS
Haibatsiri Windows 11 maPC anokwanisa kuwana akawanda maBSOD uye mashoma kana kusagadziriswa
Microsoft inomira yakasimba pa Windows 11 zvinodiwa uye chete inotsigirwa Hardware ichave iri kuwana iyo nyowani yekushandisa system. Iyi sarudzo yanga iri yekukakavara uye Microsoft iri kuronga kurega vashandisi ve tech-savvy vaise iyo nyowani Windows pahardware isina kutsigirwa uchishandisa Media Creation Tool, asi pane maviri makava - akawanda maBSOD uye mashoma kana mashoma ekugadzirisa. YeIntel CPUs, yechisere… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kusatsigirwa Windows 11 maPC anokwanisa kuwana akawanda maBSOD uye mashoma kana kusagadziriswa
Multi-chip Intel Core i9-11900K Kuwedzeredza Ongororo: Mabhodhi mana, Cryo Kutonhora
Kudzoka munaKurume, Intel yakafumura yake 11th chizvarwa che desktop desktop processor codenamed Rocket Lake. Mune mutsara wayo, iyo inomiririra desktop chip ndiyo iyo Core i9-11900K, iine cores sere, tambo gumi nesatanhatu, uye nemutengo wazvino wekutengesa we $ 545 kuAmazon. Pamwe pamwe nezviri pachena mashandiro ekuita anouya nemhando yepamusoro, kusanganisira akakwira turbo frequency, Intel yakaisa yakawanda yayo… [Verenga zvakawanda ...] nezveMultip-chip Intel Core i9-11900K Kuwedzeredza Ongororo: Mabhodhi mana, Cryo Kutonhora
AverMedia Live Bata Bolt GC555 Kutanga Maonero: Iyo Yakanyanya 4K Kubata Kadhi Mari Yaunogona Kutenga?
August 31, 2021 by jerry23
Mumakore mashoma apfuura, AverMedia yanga ichibata kuElgato mujaho rekutora kadhi repamusoro, uye vese vanga vachiedza kusvika pamusoro, mumwe nemumwe wavo achienderera mberi nekusundira miganhu mberi. Makwikwi aya akawedzera zvakanyanya apo vaparidzi nevagadziri vekoni vakatanga kusundira mitambo ye4K kune iyo huru. Zvino, mushure memwedzi yakati wandei mushure mekuburitswa kwayo,… [Verenga zvakawanda ...] nezve AverMedia Live Capture Bolt GC555 Kutanga Maonero: Iyo Yakanakisa 4K Capture Kadhi Mari Inogona Kutenga?
Kingston inoburitsa 1GB / s DataTraveler Max (USB Type-C)
Kuchengetedza uye nyanzvi yekuyeuka Kingston akaburitsa iyo DataTraveler Max (DT Max) USB Type-C flash drive. Inoti rekodhi-kutyora faira yekumhanyisa kumhanya kweiyi nyowani compact inotakurika inobvisika tsvimbo-fomati memory: inosvika 1,000MB/s kuverenga, 900MB/s kunyora. Iyo itsva DataTraveler Max iri kuitwa kuti iwanikwe mu256GB, 512GB, uye 1TB masimba. "DT Max inopa ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Kingston inoburitsa 1GB / s DataTraveler Max (USB Type-C)
Akanakisa PowerPoint Matemplate evadzidzisi
Kana iwe uri mudzidzisi uye uchida kukura kufarira pakati pevadzidzi vako, unofanirwa kutarisa aya PowerPoint matemplate. Unogona kushandisa matemplate aya kuita inonakidza slideshow kudzidzisa chimwe chinhu kuvadzidzi vako. Sezvo makirasi epamhepo ave chinhu chakakosha mazuva ano, iwe unofanirwa kutarisa aya PowerPoint matemplate evadzidzisi. Akanakisa PowerPoint matemplate e… [Verenga zvakawanda ...] nezve Best PowerPoint Matemplate evadzidzisi
Microsoft Edge yekuwana scrollbars nyowani pa Windows 11 uye Windows 10
Pamberi Windows 11's Gumiguru 2021 kuburitswa, Microsoft yanga ichiedza kugadzirisa zvinoenderana dhizaini dhizaini. Sechikamu cheyakaratidzwa revamp, Microsoft iri kuyedza Windows 11-yakafuridzirwa kutarisa kune akati wandei epakati maapplication, akadai seChromium-based Edge, Microsoft Teams, Snipping Tool, MS Paint, nezvimwe. Pane dzimwe nhau dzakanaka dzevashandisi veMicrosoft Edge pa Windows 10 uye Windows 11:… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft Edge yekuwana scrollbars nyowani pa Windows 11 uye Windows 10